Ukuphupha ngogebhezi ▷ Discover️ Discover Online ▷ ➡️
Ukuphupha ukhakhayi. Into nganye evela ephupheni inentsingiselo. Fumanisa kwesi sikhokelo intsingiselo yamanye amaphupha aphindaphindwayo.
Ukhakhayi luqukethe malunga namathambo angama-22, lawo abizwa ngokuba ngamathambo okakayi, kwaye ayinxalenye yamathambo omntu. Kwi-anatomy, ukakayi lukwahlulwe lwaba yingqondo kunye nokakayi lobuso. Ukhakhayi lobuso lwenza isiseko semathambo sobuso. Ikwabumba namehlo, umlomo kunye neempumlo.
Ngokusekwe kwiimpawu ezithile, umahluko unokwenziwa phakathi kweengqayi zamadoda nabasetyhini. Ukhakhayi oluyindoda ngokubanzi lukhulu kwaye lunzima kakhulu. Ukhakhayi lwabasetyhini, kwelinye icala, lunempumlo emxinwa kunye ne-cusps engaphambili kunye ne-coronary cusps.
Lo mahluko unokubaluleka nasemaphupheni. Kuba oku kunokunika imikhondo engakumbi malunga nomyalezo wephupha. Okanye mhlawumbi yayilukakayi lomntwana okanye lwesilwanyana.
1 Uphawu lwephupha «ukakayi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukakayi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukakayi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukakayi» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha ubona kwisimboli "ukakayi" a isilumkiso kwiphupha ukunyaniseka ebomini kwaye ujonge izinto ngokungathí sina. Akufanele ulawulwe yimvakalelo eninzi. Kwakhona, lo mfanekiso unjengephupha unokubangela iingxaki ebomini bakho. Umntu kufuneka alungiselele okhuphisana naye ukuba alwe umva.
Nabani na obona ukhakhayi lulele emhlabeni ephupheni uyakuphela ngovuyo nangempumelelo iprojekthi ethile ebomini bakhe. Ukuba umntu oleleyo ufumene ukakayi xa emba ephupheni, unokulinda Inzuzo yezemali okanye ufumane ilifa. Ukhakhayi oluncumileyo njengophawu lwephupha luphawu lweshishini elibi kunye neengxabano zosapho.
Ukutolikwa ngokubanzi komfanekiso wephupha "ukakayi" intloko yentloko eyabonwa ephupheni nayo inomdla. Ukuba ubona intloko ekhethiweyo yomhlobo ephupheni, lo mhlobo uya kumngcatsha ammonele kubomi bakhe bemihla ngemihla. Ukubonakala kwekhayi ngokwalo njengomqondiso wephupha kubonisa ukuzisola okhathaza umphuphi.
Ukhakhayi lwesilwanyana ephupheni lunokuthetha oko utshintsho ebomini babo. Kufuneka kuqatshelwe ukuba luhlobo luni lwesilwanyana kwaye kufanelekile ukuba kusetyenziswe isimboli yamaphupha. Ukhakhayi lomfazi njengomfanekiso ephupheni lunokubonisa amandla okuphupha, ukakayi lwendoda ephupheni, nangona kunjalo, lunokubonisa amandla.
Ukuba ukakayi lujongeka ephupheni njengengqayi enamathambo awele ngaphantsi, ngoko kuhlalutyo lokulala ngokubanzi oku kulumkisa ngengozi ezayo. Kuba ukakayi lunokumela nentloko ephupheni, i ubuchule bengqondo lowaphuphi.
Uphawu lwephupha «ukakayi» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lokuchazwa kwephupha, uphawu lwephupha "ukakayi" lunokubonisa ukuba lowo uleleyo kufuneka ulwakhiwo ubomi bakhe. Ukuba ubona ukakayi kwiphupha lomnye umntu apho kufanelekile ukuba libe lelinye ilungu lomzimba, ikubonisa ukuba inxenye yalo mntu ifile.
Ukuthetha nokhakhayi ephupheni ubona ukutolikwa ngokwengqondo kwephupha njengomboniso womnqweno wamaphupha wokuthetha nomntu olahlekileyo.
Ukuba, ngokuchaseneyo, ukakayi luthetha nomphuphi ephupheni, kubonisa ukuba unqatshiwe okanye unqatshelwe. Kuya kucetyiswa ukuba ujonge ngakumbi le nxalenye yobuntu kwaye uyamkele ebomini bakho.
Uphawu lwephupha «ukakayi» - ukutolika kokomoya
Ukuba ujonga uphawu lwephupha "ukakayi" ngokwembono yokomoya, uyabona ukuba lo mfanekiso uphupha usekwe ukufa nayo yonke into enxulumene nayo.